Congress-ka Mareykanka oo ku eedeeyey Shiinaha dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ay ka… – Hagaag.com
Congress-ka Mareykanka oo ku eedeeyey Shiinaha dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ay ka…
Posted on 10 Janaayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Mudanayaasha Baarlamaanka Mareykanka ayaa ku eedeeyay Shiinaha “dambiyo ka dhan ah aadanaha” iyagoo cadaadis ku haya Muslimiinta Uighur ee laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang, iyagoo ugu yeeray maamulka madaxweyne Donald Trump in cunaqabateyn lagu soo rogo Beijing, Wasaaradda Arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ka jawaabtay Khamiistii in warbixinta aysan ahayn mid ujeeddo leh oo aan lagu kalsoonaan karin.
Warbixintii ​​sanadlaha ahayd ee la sii daayay Arbacadii, guddi heer qaran ah oo ka tirsan Congrress-ka oo loo xilsaaray la socodka xaaladda xuquuqda aadanaha ee Shiinaha ayaa walaac weyn ka muujiyay masiirka Uighurs.
Washington iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay mas’uuliyiinta Shiinaha inay hayaan ugu yaraan hal milyan oo dadkan laga tirada badan yahay ee ku jira xeryaha dadka lagu hayo, laakiin Beijing ayaa beenisay eedeymahaas, iyagoo carabka ku adkeeyay in xeryahan ay yihiin xarumaha dhaqan celinta xirfadaha si looga hortago xagjirnimada.
Warbixinta ayaa lagu yiri “Guddigu wuxuu ka shakisan yahay in mas’uuliyiinta Shiinaha ay galeen dembiyo ka dhan ah aadanaha oo ka dhan ah Uighurs iyo qowmiyadaha kale ee Muslimiinta ah ee asalkooda ka soo jeedo Turkiga,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Xubin ka tirsan guddiga Chris Smith wuxuu ka hadlay marqaatiyada Uighur ee ay sheegeen in lagu dhibaateynayay diintooda darteed. “Waxaan ka hadleynaa dambiyada ka dhanka ah aadanaha ayaa si aad ah u balaaran,” Smith ayaa ku yiri shir jaraa’id.
Smith ayaa ku daray “Waxaan ka hadlaynaa wax ay la kulmayaan Uighurs, waana wax aanan la arag tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Dowladda Shiinaha, gaar ahaan (Madaxweynaha) Xi Jinping, waa in lagula xisaabtamo dhaqankan foosha xun,” ayuu yiri Smith.
Senator Marco Rubio, oo aad ugu dhaw Madaxweyne Donald Trump, ayaa balan qaaday in Congress-ka ay dhowaan meel marin doonaan sharci u baahan cunaqabateyn lagu soo rogo saraakiisha Shiinaha, isla markaana xayiraad la saari doono dhoofinta aaladaha ilaalada iyo aaladaha kale ee loo adeegsaday in lagu caburiyo Uighurs-ka Xinjiang.
Bishii December, Aqalka Wakiilada Mareykanka wuxuu meel mariyey sharci ku baaqaya in cunaqabateyn lagu soo rogo Shiinaha cadaadiska ay ku hayaan Uighur, wuxuuna sababay “niyad-jab weyn” oo ku yeeshay Beijing. Sidoo kale Aqalka Senate-ka ayaa qaaday talaabo jihadaas ah, waana in labada aqal ay ku heshiiyaan in ay qoraan qoraal mideysan.